Posted by တန်ခူး at 11:16 AM
ကောင်းလိုက်တာ…တန်ခူးရယ်။ ကိုယ်တိုင် ရထားပေါ်မှာ စီးပြီးလိုက်သွားရသလိုဘဲ။ မျက်စိထဲမှာ ကွင်းကနဲ ရှင်းကနဲ။ လူတွေရဲ့ သရုပ်ရော…ခေတ်အခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုရော ပေါ်လွင်အောင် ရေးနိုင်ပါပေတယ်။
ပြောင်မြောက်လွန်းတဲ့ သရုပ်ဖော်အရေးအသားပါဘဲ တန်ခူးရေ..
တို့ စိတ်ထဲရှိနေတာတွေကို အကုန်ရေးပြပေးသွားသလိုဘဲ ခံစားလိုက်ရတယ်။ (တန်ခူးလို အဲဒီမြင်ကွင်းတွေနဲ့ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း နှစ်ပါးသွားနေရသူတယောက်ပါ)
တော်လိုက်တာ... ဖတ်ရတာ လူပါ ရထားထဲ ရောက်သွားတယ်
ူဒီကနေ့ ပဲကျနော်လည်းရထားစီးတဲ့ပို့ စ်အသစ်တင်မလို့ ဗျ
ဖြစ်သွားတယ်။ ခင်ဗျားတို့ နဲ့ သိရတာနောက်ကျသွားတယ်
ဒီပို့ စ်ဖတ်နေရင်းနဲ့အစ်မလိုပဲ ရထားစီးနေရတဲ့ သူလို ခံစားလိုက်ရတယ်း) အရေးသားကတော့ ကောင်းလွန်းလို့ကောင်းကောင်းကောင်း ဖြစ်နေတယ်ဗျို့မြင်လုံးထဲ ကွင်း၂ကွက်၂ မြင်သွားတယ် နိုင်ငံကြီးသား ပီသတယ်ဆိုတာကြီးက တစ်မျိုးကြီးပဲ ကြီးကျယ်တယ်လို့ ပြောလို့ ရတာပေါ့နော့် :P
အသွေး အရောင်စုံလင်လှတဲ့ ရထားကို တန်ခူးနဲ့အတူတူ လိုက်စီးသွားပါတယ်။
ရေးလဲ ရေးတတ်ပါ့ ဒေါ်တန်ခူးရေ.. လို့ ဘဲ ပြောချင်ပါတော့တယ်။
(စာလုံးပေါင်းမှားသွားလို့ပထမ Comment ကို ဖျက်လိုက်ပါတယ်..) :-P
Tik..tik..tik..door closing ဆိုတဲ့ အသံလေး ပါ..ကြားယောင်လာပီ။
နောက်ပီး..ဟိုမရောက်ဒီမရောက်..အလယ်တန်း ကျောင်းသား အတွဲ လေး တွေ ရယ်- ကလက်တက်တက်..အဘွားကြီး တွေ ရယ်- အိပဲ့ အိပဲ့ နဲ့..မလေးမိသားစု ကြီး တွေ ရယ်- မလှတဲ့ကြားထဲက..မဲ့ပြ တဲ့..စလုံးမ ရှိုးများများတွေရယ်- အာကျယ်အာကျယ်..ရွှေဗမာ တွေရယ်..
the next station is City Hall station
နေ့စဉ်ရထားစီးရင်း ပန်ဒိုရာတောင် ရေးဖို့ စိတ်ကူးမိသေးတယ်။ မတန်ခူးရေးထားတာလေးက မျက်စိထဲကို မြင်ယောင်ပါတယ်ဗျို့။ သဘာဝတွေ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ပါပဲ။
တကယ်ဖတ်လို့ကောင်းတယ်,,,,သရုပ်ဖော် ကောင်းတဲ့ blogger တန်ခူး...
ရထားစီးသွားရတဲ့ အချိန်က ၄၅ မိနစ်တောင်နော်.. တချို့က ရထားပေါ်မှာ စာအုပ်ဖတ်ကြတယ်။ တချို့လည်း ဖုန်းသုံးကြတယ်။ ကျနော် ကတော့ ဘယ်တော့မှ ရထားပေါ်မှာ စာအုပ်မဖတ်ဘူး။ စာအုပ်ဖတ်တာထက် လူတွေရဲ့ သဘာဝ၊ အပြုအမူတွေ ဖတ်ရတာ ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ (စပ်စုတာပေါ့.. :P) လူတွေကြည့်ရတာ ငြီးငွေ့လာရင် အပြင်က ရှုခင်းတွေ ကြည့်လိုက်တာပဲ..ဒီပို့စ်ကိုဖတ်ရင်း ဘေးကနေ မတန်ခူးနဲ့အတူရထားလိုက်စီးနေရသလိုပဲ.. ဖတ်လို့ကောင်းတယ် မ... :)
မမရေ ရထားလိုက်စီးတာ... နိုင်ငံကြီးသားဆိုတဲ့ စကားလုံးကို တော်တော် အမြင်ကတ် နေပုံပဲ ဟဲဟဲ.. ထိုင်းမှာတော့ ထိုင်းတွေက နိုင်ငံကြီးသားလို့ သူတို့ကိုယ် သူတို့ မသုံးနှုံးပေမယ့် အဖြူတွေကို အဲလို သုံးနှုံးပြီး သိပ်ဦးစားပေးတာ.. ဒါပေမယ့် ဟိ.. ပြန်စရာ လေယာဉ်လက်မှတ်ခ မရှိလို့ ဂစ်တာတီးပြီး တောင်းတဲ့ အဖြူတွေလဲ တွေ့ဖူးတယ်.. အင်းလေ ဘူတာရုံအောက် တွေမှာပေါ့
တန်ခူးစီးတဲ့ ရထားပေါ် ကျနော်လဲ ခဏ ရောက်သွားလိုက်သလိုပဲ။
အမ တန်ခူးတို့ဆီက ရထားကို စီးဖူးသွားပြီ။ အမက မဇနိကို မမြင်ဘူးနော်။ မဇနိက အမကို လိုက်စပ်စုနေတာ ဘေးနားမှာ တိတ်တိတ်လေး။ အဟဲ။ အမစာရေးကောင်းလိုက်တာ ရသအစုံကို ပေးနိုင်တယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ။
အစ်မရေ့...ဆေးစားနေတယ် အခုတော့ သက်သာနေတယ်ဗျ စိတ်မပူနဲ့ တော့ အရမ်းနာလာရင် ထပ်သွားပြီး သေချာလုပ်ရမှာပေါ့ အစ်မမောင်က ငယ်သေးတော့ သွားဖို့ စောနေသေးတယ်လေ သွားချင်သေးဘူးးး)
အနှစ်ပဲ၊ အထာနဲ့လှမ်းပြုံးတာမြင်ယောင်ပြီး တခွိခွိရီမိတယ်..
တန်ခူး မြန်မြန် နေကောင်းပါစေ...
ရှုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေ မြန်မြန်ရှင်းပါစေ...
စိတ်လက်ကြည်သာပြီး စာတွေအများကြီး ဆက်ရေးနိုင်ပါစေ...
အားလုံး အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေ... လို့ 
မြန်မြန်နေကောင်းပါစေ၊ ပို့စ်လေးလဲ အသစ် တင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလျက်..
အားပေးစကားအတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုပေါရေ…
Anonymousရေ… ခံစားချက်ခြင်းတူတာပေ့ါနော်… ကျေးဇူးပါ…
မြတ်နိုး ရထားအတူလိုက်စီးသွားတယ် ဆိုလို့ကျေးဇူးပါ…
ကောင်းကင်ကိုရေ…စင်္ကာပူရထားနဲ့အဲဒီက ရထားတူလားဟင်…
ကိုငြိမ်းဝေရထားက အနုပညာတွေ ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့ မို့ဖတ်လို့ အတော်ကောင်းမှာပါ… ရေးပါနော်… ကျေးဇူးပါ…
နိုင်ငံကြီးသား ပီသတယ်ဆိုတာ…အင်း… ဒီထဲက အတိုင်းပေါ့ မောင်မျိုးရေ…
ကျေးဇူးပါသက်ဝေရေ… သက်ဝေလဲ ရထားပေါ်မှာလား… မတွေ့ လိုက်ရဘူး….
ပန်ရေးတာလေး ဖတ်ချင်ပါတယ်… ဘ၀တူတွေမို့ပိုမြင်သာတာထင်တယ်နော်…
ကျေးဇူးပါနှင်းပန်းရေ… သိပ်မမြှောက်ပေးနဲ့ နော်…
နုတို့ ဆီက ရထားဆို ပိုစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းမယ်နော်… ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ တွေ့ ဖူးနေတယ်…
လှိုင်ရေ… သူတို့ က သူတို့ ကိုယ်သူတို့ တော့ နိုင်ငံကြီးသားလို့မပြောပါဘူး… ဒါပေမယ့် မပြောရုံတမယ်ပဲ… ဒီမှာလဲ အဖြူဆို အသဲအသန်… တူတယ်နော်…
ကိုစေးထူးရေ.. ရထားအတူလိုက်စီးတာ ကျေးဇူး…
မဇနိရေ… တွေ့ လိုက်ဘူး… ဒီလောက်လူတွေ အကုန်လိုက်စပ်စုနေတာ… မဇနိကို ဘာလို့ မတွေ့ လိုက်ပါလိမ့်….
မောင်မျိုးရေ… နေကောင်းသွားပြီသိရလို့ဝမ်းသာပါတယ်…
ကျေးဇူးပါTZA… နောင်လဲ လာလည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်…
မခင်ဦးမေရေ… လာလည်တာ ကျေးဇူးနော်…. နောင်လဲ လာလည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်…
သက်ဝေဆုတောင်းပေးလို့အားလုံးok… ကျေးဇူး….
ကျေးဇူးပါ မ ရေ… မ တို့ ဆုတောင်းပေးလို့တော်တော်နေကောင်းသွားပြီ….
မြတ်နိုးရေ… သတိတရ ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးနော်…
တို့ ကလဲ လွမ်းနေတာ အိမ့်ရေ…